Central Women Committee News | NLD
Posted By: mygate wayon: June 16, 2020 In: Central Women Committee News, Committee News
၁၅.၆.၂၀၂၀နေ့ ၊ရွှေဂုံတိုင်၊ဗဟိုဌာနချုပ်တွင် ဗဟိုအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေး(၂/၂၀၂၀)ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စိန်ရတုမွေးနေ့အတွက် ယခင်နှစ်များလို ပွဲကျ...	Read more
Posted By: mygate wayon: January 31, 2020 In: Central Women Committee News, Committee News
25.1.2020 အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တိုင္း အမိ်ဳးသမီးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ အမိ်ဳးသမီးနွင့္နိုင္ငံေရး စကားဝိုင္းအား တံြေတးၿမိဳ႔နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ရံုးတြင္ ေဆြးေႏြးၾကရာ တံြေတး...	Read more
Posted By: mygate wayon: January 27, 2020 In: Central Women Committee News, Committee News
၂၇.၁.၂၀၂၀ နေပြည်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကချင်ပြည်နယ် အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ အမျိုးသမီး ၇၂ဦး ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။ အမျိုးသား...	Read more
Posted By: mygate wayon: January 19, 2020 In: Central Women Committee News, Committee News
ရန်ကုန် ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရန်ကုန်တိုင်း အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းကော်မတီမှ စီစဥ်သော အမျိုးသမီးနှင့်နိုင်ငံရေး စကားဝိုင်းအား အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက် အောင်ချမ်းသာ အိမ်ရ...	Read more
Posted By: mygate wayon: January 10, 2020 In: Central Women Committee News, Committee News
သံတောင်ကြီး မြို့ နယ် ၊ သံတောင်မြို့ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ လ (၉)ရက် ကရင်ပြည်နယ် သံ‌တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ သံတောင်မြို့၌ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကရင်ပြည်နယ် အမျိုးသမီးလုပ်ငန်း ကော်မတီမှ ပြုလုပ်သည့်...	Read more
Posted By: mygate wayon: December 14, 2019 In: Central Women Committee News, Committee News
14-12-2019. ပဲခူးမြို့ Mariner Hotel (2) -ဗဟိုအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် Forum of Federations တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ဖယ်ဒရယ်စံနစ်နှင့်ကျား၊မ၊ဂျန်ဒါ တန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေး...	Read more
ဘားအံ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ (၇)ရက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကရင်ပြည်နယ် အမျိုးသမီးလုပ်ငန်း ကော်မတီမှ ပြုလုပ်သည့် အမျိုးသမီးနှင့် နိူင်ငံရေး စွမ်းရည်မြှင့် ဆင့်ပွားသင်တန်းကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်...	Read more
Posted By: mygate wayon: December 01, 2019 In: Central Women Committee News, Committee News
၃၀. ၁၁. ၂၀၁၉ မှ ၁. ၁၂. ၂၀၁၉ ထိ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းကော်မတီမှ ဟင်္သာတခရိုင် အင်္ဂပူမြို့နယ်တွင် အမျိုးသမီးနှင့် နိုင်ငံရေး ဆင့်ပွား စွမ်းရည်မြှင့် ဆင့်ပွားသင်တန်းအား ကျင်...	Read more
Posted By: mygate wayon: November 15, 2019 In: Central Women Committee News, Committee News
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် – ဗဟိုအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီ ၏ – အမျိုးသမီး နှင့် နိုင်ငံရေး ( သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် စွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း ) အပတ်စဉ် (၂) ကို ယနေ့စတင် ဖွင့်လှစ်...	Read more
Posted By: mygate wayon: November 03, 2019 In: Central Women Committee News, Committee News
3.11.2019 အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းကော်မတီမှ စီစဥ်ကျင်းပသော အမျိုးသမီးနှင့် နိုင်ငံရေး ဆင့်ပွားမျှဝေခြ...	Read more